Heerka infakshanka ee dadka midabka leh ee Maine kor ayuu u kacayaa - Amjambo Africa
Waxaa qoray: Kathreen Harrison
Bishii Meey 20 keeda, Xarunta Maine ee Xakameynta Cudurrada (CDC) waxay cusboonaysiisay xogtooda heerka infekshanka COVID-19 ee dadka midabka ah in ka badan 25% marka loo eego xaaladaha guud, ama in ka badan hal qof afartii qofba ee ah dadka kunool Maine ee cudurkani uu ku dhacay. Dhanka kale, Diiwaanka Tirakoobka Mareykanka ee wuxuu muujinayaa in dadka midabka leh ay kaliya yihiin 7% tirada dadka Maine.
Isla mar ahaantaana, in kabadan 20.07% tirada guud ee caabuqyada – ama in kabadan shantii qofba hal qof oo cudurka qaba – waa daka Madow ama Afrikaan Mareykan ah ee kusugan Miane, iyadoo xogta tirakoobka ay muujineyso 1.6% tirada guud ee dadka inay yihiin Madow ama Afrikaan.Iyo heerka infekshinka faafinta ee si isdaba joog ah kor ugu kacaya. 29-kii Abriil, oo ah maalintii ugu horraysay ee CDC ay siidaayaan xog ku saabsan isir iyo jinsiyada, tirada guud ee Madowga ama African Americankaanka waxay noqotay 5.09%. Waqtigaas, kala duwanaanshahaas heerarka caabuqa ee ku saabsana qowmiyadaha ayaa u muuqday mid ballaaran. Way saddex jibaarantay tan iyo markaas. – hadda si aad ah ayey ugu dhacday, aad uga sii xumaatay.
Hogaamiyaasha jaaliyadaha soogalootiga ah ee Maine iyo xulafadooda ayaa saadaaliyay goor hore in COVID-19 ay wax u dhimayaan bulshooyinka soogalootiga ah ee nugul ee gobolka gaar ahaan sababtoo ah duruufaha dhaqaale iyo bulsho ee sida weyn loo qirayo inay saameeyaan caafimaadka bulshada. Waxay abaabuleen bartamihii bishii Maarso si ay isugu dayaan ugana hortagaan in uu fido, dadaalladaasna waa sii socdaan.
“Waxaan u soo dhowaanay shaqadeena jawaabta ee ‘Covid-19’ oo leh dareen deg deg ah bilowgi hore. Sababta oo ah kala duwanaanshaha jira ee helitaanka daryeelka caafimaadka iyo caqabadaha luqadda, iyo qodobbada kale, waxay ahayd uun arrimaha ‘goorta’ ay bulshooyinkeennu noqon doonaan si xun u saameysay, maahan ‘haddii’, “Mufalo Chitam, oo ah agaasimaha fulinta ee Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta Maine (MIRC), ayaa email ku sheegay. MIRC waa isbahaysi ka kooban 69 urur oo iskaashi ah.
“Laga soo bilaabo bishii Maarso, markii fayraska ugu horeyntii laga soo sheegay Maine, bixiyeyaal badan oo cusub oo ka tirsan kuwa ‘Main Mainer’ ayaa si dhakhso leh isugu abaabulay shabakad, waxay bixiyaan u-doodid nidaam, iskaashi u sameynta, wax ka qabashada baahiyaha deg-degga ah iyo kuwa degdegga ah, waxayna soo bandhigaan bartilmaameedka dhaqan ahaan la xiriira iyo luuqadda ku habboon ee loo yaqaan ‘Covid-19 macluumaadka,’ Fatuma Hussein, oo ah madaxa fulinta ee Xarunta Kheyraadka Muhaajiriinta ee Maine, ayaa khadka taleefanka ku wada gaadhay.
Kooxdan waxay ku kulmaan fiidiyoow, waxaana dadkaas ku jira wakiilo ka kala socda ururo aan faa’iido doon ahayn iyo kooxo ka soo jeeda gobolka oo dhan. Qaar ka mid ah kooxdu waxay si toos ah diiradda u saaraan dhibaatada caafimaad, waxayna bilowgii hore u arkeen baahida loo qabo in la helo tijaabada COVID-19, macluumaad turjumaad ah, xirfad ahaan karti u leh shaqaale caafimaad oo luqado badan ku hadla, iyo la xiriir raad-raacyada meelaha ay soogaleetigu ku nool yihiin kana shaqeeyaan ka hor intaanu dhicin fayraskaan.
Kooxuhu waxay diirada saarayaan sidii loo yareyn lahaa farqiga u dhexeeya fursadaha waxbarasho ee u dhexeeya ardayda aan haysan fursado iyo kuwa ay noloshooda is ka fiicantahay, taasoo sii weynaatay muddadii aafadan ay socotay. Kuwa kalena weli waxay ka shaqeeyaan ku xidhka dadka ilaha cuntada. Kooxo gaar ahi waxay kashaqeeyaan gobal gaar ah, oo si gaar ah wax uga qabta caqabadaha ka jira gobollada kala duwan. Sida laga soo xigtay xubno ka mid ah kooxaha shaqada, dadaal aad u weyn ayaa galay sidii loo abuuri lahaa khadad wada-xiriir oo wax ku ool ah oo leh hoggaanka waaxaha kaladuwan ee Maamulka Mills, iyo xiriiriyadooda, iyo sidoo kale dawladaha hoose.
Khubarada cilmiga faafidda cudurada iyo khubarada caafimaadka bulshada ayaan la yaabin kala duwanaanshaha weyn ee heerarka caabuqa ee dhanka isirka ama jinsiyada. Marka loo eego websaydhka ‘CDC’ ee qaran, “Taariikhdu waxay muujineysaa in cuduro daran iyo heerar dhimasha ay u badan yihiin kuwa ku saleysan isirka iyo qowmiyadaha tirada yar marka ay jiraan xaaladaha caafimaad ee degdegga ah.” Boggu wuxuu eedeeyaa xaaladaha dhaqaale iyo bulsho sida duruufaha shaqo, duruufaha caafimaad ee hooseeya, helitaanka daryeel caafimaad, iyo xaaladaha nololeed ee kala duwanaanshaha.
Bishii Maarso 13, koox ka kooban 80 qof oo matalaya ururo badan, oo bartilmaameedsanaya baahiyaha caafimaad ee bulshooyinka soogalootiga ah inta lagu guda jiro dhibaatada, ayaa la kulmay Dr. Nirav Shah, Agaasimaha Xarunta Maaraynta Cudurada (CDC), markay codsadeen. wadahadal ay la yeeshaan Kristine Jenkins iyo Jamie L. Paul, oo ah xiriiriyaha bulshada ee CDC, ayaa sii socday tan iyo wakhtigaas, iyada oo shirarku ay si isdaba joog ah u dhacayeen, iyada oo looga jawaabayo walaaca sii kordhay ee ku saabsan gudbinta bulshada ee gobollada Cumberland iyo Androscoggin, iyo faafitaanka goobaha shaqooyinka ay dad badani ku badan yihiin. soogalootiga ayaa ka shaqeeya, sida Tyson Foods, iyo Bristol Seafood. Dr. Shah wuxuu la kulmay dhowr jeer tan iyo 13-kii Maarso hoggaamiyeyaasha bulshada soogalootiga ah iyo xulafadooda oo ah hay’ado aan macaash doon ahayn.
Iyada oo ay weheliso kordhinta, tijaabinta marin-u-helka, ballaarinta raadinta ay sameeyeen xubnaha lagu kalsoon yahay ee jaaliyadaha kala duwan, hoggaamiyayaasha bulshada ayaa si adag ugu dooday ku lug lahaanshaha hawl wadeenada wacyigelinta bulshada (CHOWS) sidii loo gaadhsiin lahaa bulshooyinka soogalootiga ah ee gargaarka u baahan.
Nélida R. Berke, isku duwaha Barnaamijka Caafimaadka dadka laga tirada badan yahay, oo ku dhexyaala Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Magaalada Portland, ayaa ku macneeyay wicitaan Zoom ah in CHOWs ay faham dhow ka qabaan bukaannadooda, badanaaba ay wadaagaan qiimayaal la mid ah, waayo-aragnimo nololeed, qowmiyadeed. asalka, heerka dhaqan-dhaqaale, iyo luqadda. “CHOWs waa xubno ka tirsan bulshooyinka aan u adeegno,” ayay sharraxday. “CHOWs horey ayaa loo yaqiinay oo howsha si dhakhso leh ayey ku qabsan karaan.
Waxay u kaydiyaan waqti iyo lacag nidaamka maadaama dadku ay si dhakhso leh ula hadli doonaan, waxay siinayaan CHOWs macluumaad shakhsi ah oo aysan awoodi karin inay si fudud ula wadaagaan qof aan ahayn beeshooda. Dadka kale waa inaad qorsheysaa sida bulshada loo gaarsiin lahaa, xiriir si loo sameeyo – waqti dheer ayey qaadataa. ”
Lisa Tapert, Maamulaha guud, Barnaamijka Caafimaadka ee Maine Mobile, waxay ku dhiirrigelisay samaynta saldhigyo baaritaan oo kudhexyaalla bulshooyinka soogalootiga ah, sidaa darteed waxay caawinaysaa kuwa aan haysan gaadiid, oo laga yaabo inaysan ku xirnayn takhaatiirta. Waxay kaloo tilmaamtay ahmiyada ay leedahay la shaqeynta CHOWs iyo hogaamiyaasha jaaliyadaha soogalootiga. Waxaan jeclaan lahaa inaan arko CDC-da oo lashaqeysa ururada sida Mano en Mano, Maine Access Immigrant Network, New Mainers Public Health Initiative, iyo kuwa kale si loo ogaado halka looga baahan yahay tijaabooyinka.
Isagoo ka fikiraya faafitaanka dhacaya usbuucyadii la soo dhaafay ee cudurka kaasoo kadhacay meelaha lagu beero dhirta iyo meelaha kale, Tapert wuxuu yiri inta lagu gudajiray taleefanka 14ka May, “Kaliya waqti ayaa ah ka hor intaanan helin faafitaano dheeraad ah haddii aan baaritaan la helin.”
Fatuma Hussein, oo khadka taleefanka lagu gaarey May 20, waxay tilmaamtay in toddobaadyo kadib shirar iyo dhisidda iskaashi lagu horumarinayo qaab dhismeedka, Lewiston Auburn ay gaareyso isku xirnaan jawaabcelin ah oo ka socota beeshooda.
Waxaan leenahay iskaashi wanaagsan, iyadoo xiriirka uu salka kuhayo dhulka.
Dhammaanteen waxaan ka wada shaqeyneynaa sidii looga hortagi lahaa faafitaanka aan loo baahnayn, waxaanan doonayaa inaan u mahadceliyo nidaamyada iyo shuraakadayada, ”ayay tiri Xussein.
Shaqooyinka mushaharka yar ee isbitaallada, guryaha kooxaha, guryaha daryeelka, dukaannada cuntada, iyo warshadaha cuntada ayaa badanaa ah shaqooyinka hoos u dhaca oo ay helaan soogalootiga, iyo heerar sare oo caabuq ah ayaa laga diiwaan geliyey dadka ka shaqeeya shaqooyinkaas.
“Dadka ka shaqeeya shaqooyinkan waxay ku jiraan safka tooska ah ee fayraska. Gurigooda ma joogi karaan, ”ayuu Shah ku sheegay shir-jaraa’id oo uu qabtay May 22.
Xaaladaha nololeed ee cakiran ayaa sidoo kale lagu xusay CDC iyada oo gacan ka geysaneysa tirada culus ee cudurada faafa ee lagu qaado kooxaha liita inta lagu guda jiro faafitaanka cudurka. Maadaama kirada ay qaali ku tahay Maine, shaqaalaha mushaharka hooseeya badanaa waxay la wadaagaan guryaha. Abdulkerim Said, aasaasaha iyo agaasimaha fulinta ee barnaamijka ‘New Mainers Public Health Initiative (NMHI)’, oo khadka taleefanka lagu gaarey, wuxuu sharraxay in bulshadiisa dad badani ay wadaagaan hal aqal, iyo xubnaha bulshada ee tijaabiya cudurka fayraska inaysan haysan waddo ay kaga soocaan xubnaha kale. reerahooda guryahooda.
Crystal Cron, madaxweynaha Presente! Maine, oo ah koox u doodda bulshada Latinx ee Maine, ayaa ku raacay Saciid.
“Dad badan oo ka tirsan bulshada oo ka kooban afar ilaa shan qoys ayaa ku nool hal abaartiment, qoys walbana wuxuu wadaagayaa qol jiif, taasna waxay ka dhigeysaa wax aan macquul aheyn kala fogaanshaha bulsheeda. Haddii aad xannuunsato oo aad u baahan tahay inaad ka go’do qoyskaaga, xaggee baad tagaysaa?” ayuu yidhi Cron.
Bishii Meey 26, ayuu Shah ka sheegay shirkiisa jaraa’id ee maalinlaha ah in qandaraasyo lala saxeexday hoteelo loogu talagalay kuwa aan awoodin inay si amaan ah ku joogaan guriga. Waxaan wada hadalo badan la yeeshay kooxaha New Mainer in muddo ah hadda, taasna welwelka [ku saabsan baahida loo qabo goobo is-go’doominta] ayaa mar labaad iyo mar labaad la sheegay. Waxaan la shaqeynay hoteellada aagga si aan u shaqo-dhigno qandaraasyada si dadka loo siiyo meelo ay si ammaan ah ugala baxaan, iyadoo la helayo taageerada saxda ah ee bulshada ee la siinayo mudadaas, taasna hadda waa jirtaa, ”ayuu yidhi.
Dr. Shah ayaa dhowr jeer ku sheegay shir jaraa’idyada in gudbinta guryaha ee COVID-19 ay door weyn ka tahay faafitaanka viruska Maine. Qalabka tijaabada ee la ballaariyey oo hadda la heli karo, wuxuu dhiirrigelinayaa tijaabinta kuwa calaamadaha leh, ama la soo xidhiidhay qof tijaabiyey togan. Bishii Meey 19keedii, CDC ayaa ku dhawaaqdey in uu ku faafay guryaha dhismaha ee 100 State Street oo ku yaal Portland. 200 oo qof ayaa lagu tijaabiyey saqafka hoolka dhismaha May 20-keedii. Ilaa 26-kii Maajo, 23 ka mid ah tijaabooyinkaas ayaa la xaqiijiyay inay yihiin kuwo wanaagsan, waxaana socda baaritaanno lagu ogaanayo halka laga yaabo inuu ku dhacay fayraska iyo cidda ay si aan ula kac ah ugu faafin.
Meesha Dr. Shah iyo qaar ka mid ah xubnaha saxaafadda aysan indhahoodu ku arkin ayaa ah sida ay uga caga jiidayaan inay ka soo warbixiyaan heer degmo macluumaad ku saabsan isirka iyo qowmiyadaha ay soo ururiyeen dadka cudurka faafa. Dr. Shah ayaa marar badan ka sheegay qoraallada jaraa’id ee uu ka walaacsan yahay in siideynta xog caynkan oo kale ah ay qatar ku tahay bartilmaameedka xubnaha bulshada qaarkood.
Chitam wuxuu ku raacsanyahay booska Shah. “MIRC ma ahan taageerida siideynta macluumaadka isirka iyo qowmiyadeed heer degmo / magaalo maxaa yeelay waxba kama baddeleyno wixii aan horayba u ognahay saameynta ay ku leedahay COVID-19 ee bulshooyinka midabka leh, waxaana ka cabsi qabnaa inay taasi kaliya cadaato” Waxay horseed u noqotaa cambaareynta bulshooyinkayaga. Heerka sare ee caabuqa aan aragno wuxuu ku saleysan yahay sinnaan la’aanta nidaamsan”.
Alison Beyea, oo ah agaasimaha fulinta ee ACLU of Maine, ayaa ku sheegtay farriin qoraal ah, “Meelo badan oo ka tirsan Maine, shaacinta macluumaadka caafimaad ee lagu garan karo waxay lamid tahay tahay sida fashilinta dadka qaar. Marka la eego khataraha ay wajahayaan bulshooyinka nugul, gaar ahaan bulshooyinka midabka leh, dawladda waxaa ka saaran waajibaad gaar ah inay ilaaliso asturnaanta shaqsi ahaanta siidaynta noocaas ah.
Emailka, Rachel Healy oo ka tirsan Ururka Xoriyadda Madaniga ee Mareykanka ee Maine ayaa tiri, “Dhamaanteen waxaan leenahay masuuliyadeena inaan wax ka qabano farqiga haatan jira iyo sababihii taariikhiga ahaa iyo sababihii loogu talagalay iyaga – isla mar ahaantaana si adag aan uga soo horjeedsano isku day kasta oo la adeegsanayo macluumaadkan. in la takooro, ama rabshado loo sameeyo isla bulshadaas. ”
Claude Rwaganje, xildhibaanka Westbrook City, iyo maamulaha fulinta ee ProsperityME, ayaa yiri, “Siideynta macluumaadka xarafka zip wax kama badali doono. Xogta aan horey u helnay waa mmid ku filan inaan tusno inay jirto kala duwanaansho xagga isirka ah, mar hore waa mid ku filan inay na siiso sawir weyn oo ku saabsan sida aan si wanaagsan loogu daryeelin dadka laga tirada badan yahay. Ma doonayno xogta si loo gaarsiiyo kuwa horay loo waxyeeleeyay. ”
hah wuxuu tilmaamay bishii Maajo 26-keedii inuu filaayay sii deynta xogta heerka waxoogaa ka sarreeya ee warbixinnada soo socda. Wuxuu sheegay inuu rumeysan yahay in tirada guud ee kiisku ay hadda aad ugu badan tahay Maine si loo siidaayo xogta isla markaana uu wali u ilaaliyo asturnaanta.
PreviousRabshado iyo isu soo bax ayaa ka hordhacay doorashada madaxweynaha iyo sharci dejiyeyaasha ee Burundi, in kasta oo lagu guda jiro COVID-19
NextEvariste Ndayishimiye oo loo dhaarinayo inuu noqdo Madaxweynaha Burundi kadib geeridii ku timid Nkurunziza